Kukurudzira Kuve Nehupenyu Huri Nani uye Hutano Hupenyu (isu tinosimudzira musika wevakadzi)
na admin pa 20-04-20
Shapewear Inopa Instant Miderals Kupururudza Wakamboyamwa here mudumbu mako kare uye uchiibata? Ehe, chimiro chechimiro chinogona kupa iwo kutarisa ipapo pakarebesa pasina kana kunetseka nekuyamwa mudumbu rako. Icho chikonzero ndechekuti chimiro chekupfeka chinotevedzera mhedzisiro yekuyamwa mu ...
Inofanirwa kuve neyevakadzi izwi
na admin on 20-04-02
Shapewear nhasi kuchema kuri kure nenguo dzekupfekedzwa naamai vedu. Mazuva ano ivo vanopfeka uye vanofarirwa nenyeredzi dzakawanda uye celebs uye ndeyechokwadi yakajeka kune yega yega kabati.Asi nei? Sei isu tichipfeka chimiro? Kunyanya Kutarisa: Kunyangwe iri pati, yakapfeka kana yekushambidzika kupfeka, chimiro chekupfeka chinogona kutap ...
Kana iwe usingade kubvumidzwa kana iwe uchishandisa yakajairwa bras, Yako mapfekero anogumira, tambo dzinobuda kunze kubva kumusoro uye kunyangwe kana dzakanyatsosungwa kumashure, unogara uchiziva nezvevari kuwa kana kutama kubva pane imwe nzvimbo. Zvakare, iyo bhendi yakasimba kana underwire inogona kukusiya uine yakadzika rashes. ...